Ngiyabonga ngempendulo yakho ezosheshe izobuyela kuwe futhi lapho ngingabonga
NgoDisemba 2, 2020
Xoxa Nathi! Sinikeza Ukuxhaswa Kwamahhala Kokuxoxa
Ephreli 2, 2020
Ibhukwana le-Plug-N-Play Universal lamaKhithi we-HHO-X-CELL Predator Kits
Bukela amavidiyo ngokufakwa kochwepheshe
Ibhukwana le-DIY Universal lama-KHO-X-CELL Predator Kits
Landela Umdwebo ukuthi ungaxhuma kanjani izintambo ze-DIY. Ungalokothi uxhume izintambo emthonjeni wamandla ngaphezu kwe-2.5V njengebhethri / ishaja engu-12V / 24V ngqo kuphiko oluphakathi le-HHO Kit, olungafika ku-2.5V kuphela olunikezwa amandla yi-PWW AMP Booster. Ukusebenza kahle, kuyadingeka ukusebenzisa i-PWM AMP Booster ene-2.5 V 15A noma i-PWM 66W Celtic Tiger AMP booster 2V 30A entsha. Iyunithi eliphakathi le-HHO Kit lizolimala, futhi iwaranti ngeke isasebenza.